FAHALASAN’I DADAH RABEL (MAHALEO) : Notolorana mari-boninahitra « grand officier de l’ordre national »
Misaona tanteraka ny tontolon’ny zavakanto manoloana ny fahalasan’i “Dadah” ao amin’ny tarika Mahaleo. 8 novembre 2019
Mpanakanto, nanana ny lazany ary azo ambara fa nampiray ny Malagasy ny Kanto navelany. Mangidy amin’ireo mpankafy manerana ny Nosy ny fodiamandriny ary koa hita taratra fa mihena an-daharana tsikeliky ny ao anatin’ny tarika, izay tena naha ontsa tanteraka ny rehetra.
Ho fanomezam-boninahitra farany azy dia tonga nidododo tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahan-tena Mahamasina avokoa ireo mpankafy, ireo mpanakanto namana, sy ireo solon-tenam-panajakana maro be, ny alarobia hariva 06 novambra lasa teo.
Omaly alakamisy moa dia natao ny fanaovam-beloma azy farany tao amin’ny fiangonana FJKM, katedraly Analakely mialohan’ny nanaterana ny nofo mangatsikany tao Mandrosoa Betafo izay misy ny fasan-drazany. Tontosa ihany koa ny fanomezana mari-boninahitra « grand officier de l’ordre national » an’ itompokolahy Dadah Rabel.